Kindergartens | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
ny teny fitsapana ny teny VOICE dia mila zahana amin'ny O. faharoa miandry valiny ...
jereo ny teny hoe VOICE mila manamarina ny faharoa O. miandry valiny ... Tsy teny fanamarinana ity. Teny maro izay ianarana ao amin'ny filaharan'ny voambolana ho tsy azo hamarinina amin'ny sekoly fanabeazana fototra no tena ...
Ahoana no fomba handaminana araka ny tokony ho izy ny asan'ny komity misahana ny ray aman-dreny any am-pianarana?
Ahoana ny fandaminana araka ny tokony ho izy ny asan'ny komity ray aman-dreny any amin'ny akaninjaza? Salama! Fantaro azafady ny toerana misy ny komitin'ny ray aman-dreny ao amin'ny akaninjaza. 1. Tanjona sy atin'ny asa. Natsangana ny komitin'ny ray aman-dreny mba ...
Azafady mba ambarao amiko tononkalo, hira momba ny tanana
azafady mba lazao amiko tononkalo, hira momba ny tanan'ny reny maotina, manarona ny felatanana amin'ny felatanana, tanana milamina no eo ambony latabatra.Faherezana very, manolana ny rantsan-tànany amin'ny fanaintainana, misintona mosara kely izy ireo. tanora ianao taloha, nanoroka oroka malefaka ... tanana tia, tsara fanahy, malala, ...
Tantarao ny faritra misy ny fivoaran'ny zaza, araka ny fampianaran'ny LS Vygotsky
Farito ny faritry ny fivoaran'ny zaza, araka ny fampianaran'i L. S. Vygotsky Eny, manokatra ny Vygotsky ianao ary mamaky ny loharano voalohany, mianatra avy amin'ny hearsay ve ianao? Ny faritry ny fampandrosoana akaiky dia ny haavon'ny fampandrosoana tratran'ny zaza ao ...
Lazao amiko fampidiran-dresaka fohy ho an'ny tantara an-kira
Lazao ahy ny fampidirana fohy ny angano. Teo aho, tantely, nisotro labiera. Nidina ny volombava izy io, nefa tsy tafiditra tao am-bava. Tsy ho ela dia hitantara ilay angano fa tsy ho vita tsy ho ela. ... Tsy misy fitenenana ...
Mandra-pahoviana no hiasa any amin'ny akanin-jaza?
Manokatra ora manomboka amin'ny ora firy ary mandra-pahoviana no tokony hiasa ny akanin-jaza ??? manana fandaharam-potoana ny fitantanan-draharaha. Matetika ny zaridaina dia misokatra amin'ny 8 ka hatramin'ny 19 na ny 7 ka hatramin'ny 18.
Azavao rehefa manao fikarohana, dia vondrona roa no voafantina. Ny fanandramana dia misy ireo ankizy izay anaovana asa mba hamoronana zavatra amin'ny fomba manokana sasany. Ao amin'ny fifehezana - ny ankizy izay ...
Fanampiana hanoratra tantara kely momba ny renibeny iray ho an'ny ankizy iray ao amin'ny akanin-jaza iray
Ampio aho hanoratra tantara kely momba ny renibeny ho an'ny zaza any amin'ny akaninjaza Hi, izaho ... manan-renibeko aho. Ny anarany dia ... tiako be izy! Rehefa tonga izy dia mitondra fanomezana foana ...
Tena mila andininy momba ny rivotra aho!
Tena mila andininy momba ny rivotra isika! Ilaina ny rivotra madio ary ilaina amin'ny ankizy! Mahafinaritra be ho anay ny mandeha! Ary tsy misy aretina! ... nataon'i Oksana Krynina Breathing Mifoha amin'ny hatsembohana mangatsiaka aho mifoha amin'ny ...
Manaova ohabolana sy teny momba ny legioma sy voankazo ho an'ny kindergarten.
Atsipazo ohabolana sy ohabolana momba ny legioma sy voankazo ho an'ny akaninjaza. Ny legioma tsirairay dia samy manana ny fotoanany avy. Tongolo avy amin'ny aretina fito. Ny legioma rehetra dia samy manana ny fotoany avy. (Ohabolana Rosiana) Mila fotoana be dia be ny ravina ...
Ilaina ny piozila!
Ilaina maika ny ankamantatra! Raha tsy mahazaka ny spaonjy, tsy manasa, tsy malaina, mandray ny asa aho: Fehiloha, kiho misy savony sy fikosehana, Ary kosehiko ny lohaliko, tsy misy hadinoko. (Sponjy) Tarika elastika ...
Lazao ahy, azafady, ny fahazarana isan'andro ao anaty fihinanam-bilona! Firy taona no nalain'ilay zaza tao amin'ny garderie ary inona no tokony ho azony atao?
Azafady mba lazao amiko ny fanazaran-tena isan'andro ao amin'ny fihinanam-bilona! Manomboka amin'ny firy taona ny zaza no entina any amin'ny akanin-jaza ary inona no tokony ho vitany samirery? Misy FITSIPIKA MAFANA MOMBA NY INSTITUSIANA FAMPIANARANA PRESCHOOL, izay voasoratra hoe: "Fanabeazana eo amin'ny ...
Boky ho an'ny vondrona eo afovoan'ny ankizy madinika
Boky ho an'ny vondrona afovoan'ny akanin-jaza Karl Marx "Capital" Anontanio ny mpampianatra ao amin'ny akanin-jaza ho an'ny "Programme fanabeazana sy fanofanana". Misy ny lisitr'ireo tantara foronina isaky ny sokajin-taona: tononkalo, angano, ...
Iza no manan-jo hahazo tombontsoa amin'ny fandaniana zaza kamboty?
Iza no mendrika hahazo tombony amin'ny garabola? Ny ankizy manana fahasembanana (ankizy manana fahasembanana miaraka amin'ny taratasy fanamarinana mety) manatrika garabola maimaimpoana, 50% no aloa amin'ny fikolokoloana ny ankizy avy amin'ny fianakaviana lehibe ...
Ary mbola mizarazara ho silamo izy: tandroka, bibilava, lasopy
Ary zarao koa amin'ny vaninteny: gnome, bibilava, gnome perch, bibilava-ya, o-kun. bibilava iray syllable iray-sy-vanona roa ny isan'ny zanapeo ao amin'ny teny ary firy ny vaninteny misy zanatsoratra ao amin'ny teny ...
izay mahalala ny kankana
iza no mahalala hoe inona ny kankana Avy amin'ny taona 6 - 7 volana, ny zaza dia manomboka mianatra mavitrika momba an'izao tontolo izao manodidina azy fa tsy amin'ny taovan'ny fahatsapana fotsiny, toy ny fahitana, ny fihainoana, ny fofona, ny fahatsapana tsiro, fa koa ...
Ahoana ny fomba famolavolana tsara ny fitsipika momba ny fifaninanana famoronana ankizy?
Ahoana ny fomba hamoronana fitsipika amin'ny fifaninanana famoronana ankizy? Nankatoavin'ny: Lehiben'ny MBDOU __________ REGULATIONS anarana feno momba ny fifaninanana sanganasa famoronana ohatra Ny satroka voalohany indrindra Fepetra ankapobeny Fifaninanana asa famoronana Ny satroka voalohany indrindra ...
Inona no fanamarinana rospotrebnadzor any amin'ireo zana-pokontany?
Inona no fizahana an'i Rospotrebnadzor amin'ny akaninjaza? Mety diso hevitra ianao, tsy fanaraha-maso ny mpanjifa Rosiana izany, fa fanaraha-maso ny fanabeazana Rosiana. Fanarahana ny SanPin. Mitahiry ny diary, boky ara-pitsaboana, kilasy, regimen ...
Poety tsara momba ny mpitsabo arifomba. Tena nilaina maika! Share. azafady !!!
Tononkalo mahafinaritra momba ny mpitsabo miteny. Tena ilaina maika !!! Share. tsisy fisaorana !!! Faharetana sy famoronana, fikirizana ary fandresena - Ireo no dingana lehibe indrindra amin'ny asan'ny mpitsabo miteny. Tsy maintsy miteny daholo i Nadis, Vani, Viti, ...
Sanminimum ho an'ny mpampianatra ao amin'ny kindergarten. Duration of limitations.
Sanminimum ho an'ny mpampianatra akaninjaza. Statuta fetra. ) Ity ny fehin-kevitra vaovao SanPiN 2013 an'ny Lehiben'ny Dokotera misahana ny fahadiovan'ny fanjakana Federasiona Rosiana tamin'ny 15 Mey 2013 N 26, Moskoa avy amin'ny "On fankatoavana ...
59 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,045.